Muxol (မြူဇောလ်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Muxol (မြူဇောလ်)
Muxol (မြူဇောလ်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Muxol (မြူဇောလ်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Muxol (မြူဇောလ်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Muxol သည် ချွဲပျော်ဆေး အမျိုးအစားဖြစ်သည်။
Muxol ကိုလေပြွန်ရောင်ခြင်း၊ အဆုတ်လေပြွန်ငယ်လေးများရောင်ပြီး အဆုတ်ရောင်ရောဂါဖြစ်ခြင်း၊ နာတာရှည် အဆုတ်ရောင်ရောဂါဖြစ်ခြင်း၊ အဆုတ်ခဲခြင်း၊ လေပြွန်ရှိကြွက်သားများ အားနည်းပြီး လေပြွန်ရောင်ခြင်း နှင့် ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါဖြစ်ခြင်း အစရှိသည့် အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါများကို ကုသရာတွင် အသုံးပြုပါသည်။
ထို့ပြင် လေပြွန်ရောင်ခြင်းဝေဒနာ ရုတ်တရက်ပြင်းထန်လာသည့် အခါမျိုးတွင် Muxol ကို ပိုးသတ်ဆေးများနှင့် တွဲပေးနိုင်ပါသည်။
Muxol (မြူဇောလ်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
Muxol ကို အစာစားပြီးပြီးချင်းသောက်ပါ။ ဆေးကို အလုံးလိုက်မြိုချပါ။ မဝါးရ၊ မချေရ။
Muxol (မြူဇောလ်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Muxol ကိုတိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာကအကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Muxol ကိုရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
Muxol ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီးသိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုးဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုမေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။)
Muxol ကိုအိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေဆေးချတာမျိုးကိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာစနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Muxol ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Muxol (မြူဇောလ်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
သင်သည် Ambroxol သို့မဟုတ် အလားတူဆေးများနှင့် ဓါတ်မတည့်ခြင်းရှိလျှင်
Steven Johnson ရောဂါစုဖြစ်ဖူးလျှင်
(Muxol သည် Steven Johnson ရောဂါစုကို ဖြစ်စေနိုင်သော ဆေးဖြစ်သည်။ Steven Johnson ရောဂါစု ဆိုသည်မှာ အရေပြားတွင် အနီကွက်များဖြစ်ပြီး နောက်ဆုံးတွင် ရေကြည်ဖုများဖြစ်ကာ ပေါက်ထွက်ပြီး အနာများဖြစ်သော ရောဂါစုဖြစ်သည်။ Muxol သည် ထိုသို့ဖြစ်ခြင်းမျိုးရှားပါးသော်လည်း ဖြစ်လာခဲ့သည်ရှိသော် အသက်အန္တရာယ်ရှိသောကြောင့် ဆရာဝန်ထံချက်ချင်းသွားပြရမည်ဖြစ်သည်။)
Muxol ကို အသက် ၂ နှစ်အောက် ကလေးများအားမတိုက်သင့်ပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Muxol (မြူဇောလ်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Muxol (မြူဇောလ်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
Muxol ၏ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအချို့မှာ
ဓါတ်မတည့်မှုဖြစ်ခြင်း(အနီဖုများထွက်ခြင်း၊ အင်ပြင်ထခြင်း၊ယားယံလာခြင်း၊ အသက်ရှုကျပ်လာခြင်း၊ ရင်ကျပ်ခြင်း၊နှုတ်ခမ်း ၊ လျှာနှင့် လည်းချောင်းများရောင်ရမ်းလာခြင်း)
ဓါတ်မတည့်မှုကြောင့် အရေပြားတွင် အဖတ်လိုက်နီရဲကွာကျခြင်း (Stevens-Johnson syndrome) စသည်တို့ဖြစ်သည်။
ဘယ်ဆေးတွေက Muxol (မြူဇောလ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Muxol ဟာသင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Muxol (မြူဇောလ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Muxol က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကိုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Muxol (မြူဇောလ်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Muxol ဟာသင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပိုဆိုးသွားစေတာဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အစာအိမ်အနာဖြစ်ခြင်း တို့ဖြစ်ပါကသင့်အတွက် စိတ်ချရမှုရှိစေရန် ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို မေးမြန်းပါ။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Muxol (မြူဇောလ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ 30-120 mg (သောက်ဆေး၁ပြားမှ ၄ပြား) ၈/၁၂ နာရီခြား နေ့စဉ်သောက်နိုင်သည်။
ကလေးတွေအတွက် Muxol (မြူဇောလ်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အသက် ၂ နှစ်အထိ– သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ ဆေးရည် လက်ဖက်ရည်ဇွန်းနှင့် တဝက် တနေ့ ၃ ကြိမ်။
အသက် ၂နှစ်မှ ၅ နှစ်အထိ– သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ ဆေးရည် လက်ဖက်ရည်ဇွန်းနှင့် တဝက် တနေ့ ၃ ကြိမ်။
အသက် ၅ နှစ်အထက် – သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏမှာ ဆေးရည် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း တနေ့ ၂-၃ ကြိမ်။
Muxol (မြူဇောလ်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Muxol ကိုအောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Ambroxol Hydrochloride သောက်ဆေးရည် 15 mg /5ml
Ambroxol Hydrochloride သောက်ဆေးရည်30 mg /5ml
Ambroxol Hydrochloride သောက်ဆေးပြား 30 mg
Muxol ကိုသောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်မှာပဲသောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။